Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa ku geeriyooday Ahmed Kathrada oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii u soo halgamay in dalka laga saaro xukunkii midab takoorka. - Magudhe news
Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa ku geeriyooday Ahmed Kathrada oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii u soo halgamay in dalka laga saaro xukunkii midab takoorka.
Waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela, kaasi oo ay muddo 18 sano ah ku wada xirnayeen xabsiga Robben Island.
Markii xabsiga laga sii daayay, waxa uu ka mid noqday golaha fulinta ee xisbiga African National Congress, waxaana loo magacaabay in uu noqdo la taliyaha dhinaca siyaasadda ee Mandela.
Waxa uu ka fariistay baarlamaanka sanadkii 1999, balse weli wuxuu si firfircoon uga dhex muuqday siyaasadda. Dhawaan waxa uu cambaareeyey dadkii doonayey in uu is casilo madaxweyne Jacob Zuma.
Waxa loogu yeeray jiray magaca Kathy. Axmed Kathrada waxa uu ahaa shaqsi ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii hore, Nelson Mandela. Sidoo kale waxa uu ahaa shaqsi u ololeeyn jiray xuquuqda aadanaha.
Si la mid ah Mandela, 27 sano ayuu ku qaatay xabsi, waxaana loo xiray halgankii ay ugu jireen in ay meesha ka saaraan xukunkii ay hormuudka ka ahaayeen dadkii caddaanka ahaa ee tirada yaraa.
Waxa la xukumay 1963-kii, ka dib dacwo caan noqotay oo loo baxshay maxkamadeyntii Rivonia. Waxa uu ku dhashay gobolka waqooyiga galbeed oo la oran jiray Transvaal.
Markii uu 12 jirsaday waxa uu ku biiray oo xubin ka noqday dalladii da’yarta ay ku midowday ee Young Communist League, ka dibna waxa uu ku biiray xisbi la oran jiray Transvaal Indian Congress.
Waxa uu qaatay shahaadadiisii kowaad ee jaamacadda intii uu ku xirnaa xabsiyada Robben Island iyo Pollsmoor, waxaana uu bartay culuumta taariikhda, siyaasadda Afrika iyo takhasuska dambi baarista. Hase yeeshee maamulkii midab takoorka ayaa ka hor istaagay in uu sii wato waxbarashadiisa.
2013-kii waxa uu fursad u helay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama uu tuso qolkii uu ku xirnaa xabsigii Robben island, waxa uuna ku yiri “17 sano iyo bar ayaan qolkaan ku xirnaa. Waxaan waayey caruurtaydii”.
Waxaa aad loo xasuustaa khudbaddii uu jeediyey markii uu dhintay Nelson Mandela Disembar 2013-kii. Waxa uu yiri “waxaan lumiyey walaal, nolosheydu waa ay marantahay, mana aqaano cid aan weheshado”. Da’diisu waxay ahayd 87 sano.
Previous PostWe’re not a part of Somalia, Mr. Trump — and don’t belong in your banNext PostAskari gabadh safar ah ku dilay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho